रौतहटमा भयो दुनियाँ चकित हुने घ’टना, देख्दा सबैको हो’स् उड्यो ! – Khabar Chautari
रौतहटमा भयो दुनियाँ चकित हुने घ’टना, देख्दा सबैको हो’स् उड्यो !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पौष १७, २०७७ समय: १९:१०:०१
काठमाडौ । रौतहट जिल्लाको बलान बिहुल गा.पा. वडा नं. ०६ रौतहटमा दुनियाँ सबै चकित हुने घ’टना भएको छ । त्यहाँ रहेको श्री रौतहट ठाकुर बाबा (बड्कि) पोखरीमा एउटा अदभुत घ’टना भएको छ । त्यसै गाउँको एउटी १४ वर्षकी बालिका बड्की पोखरीको पानीमा कमलको फुल टिप्न जाँदा डु’ब्न पुगिन् ।
उनी डु’बेको ७ घण्टापछि बल्ल फेला परिन् । तर दुनियाँ चकित हुने दृष्य देखियो । उनी ७ घण्टापछि जि’उदै पोखरीबाट बाहिर निस्किइन् । वरिपरि खोजी र उद्धारमा खटिएका सबै मानिस चकित बने । उनीहरुले लगातार ७ घण्टा खोज्दा समेत पोखरीमा उनी भेटिइन् ।
पोखरीको गहिराई निक्कै भएका कारण कतै द’विएको भन्दै आशा नै ह’राएको थियो । तर सयौ स्थानीयकै आँखा अगाडी उनी पोखरीबाट नै बाहिर निस्किइन् । डु’बेको र क’राएको देख्नेहरुपनि छन् । यो घ’टनाले अहिले त्यहाँ चमत्कार भएको आभास भएको छ । यसै घ’टनालाई माननिय गोबिन्द न्यौपाने र गा.पा. अध्यक्ष दयान्न्द गोईत पनि पुग्नु भएको थियो ।
वडा नं. ०६ का अध्यक्ष सुर्य कुमार दास यो घ’टनाको प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्छ । उहाँले यो सबै बेलिविस्तार लगाउँनुभयो । उनी पोखरीमा यही भदौ ११ गते साँझ ५ बजे डु’बेकी थिइन् । रातभरीसम्म खोजी चल्यो । उनी राति १२ बजेपछि त्यही पोखरीबाट बाहिर निस्किइन् । उनको शरीर पुरै भिजेको थियो । हिलोले ढा’केको थियो ।